China Shelter Hospital Warshada warshadda ogsijiinta iyo soo saarayaasha | Sihope
Ogsajiinta PSA waa qalab toos ah oo ka sooca ogsijiinta hawada. Marka loo eego waxqabadka shaandhada molecular, adsorption marka cadaadiska kor u kaco iyo desorption marka cadaadiska dabacsan yahay. Oogada shaandhada molecular iyo dusha gudaha iyo gudaha waxa ka buuxa dalool yaryar. Unugyada Nitarjiinku waxay leeyihiin xawaare fidinta degdega ah iyo molecules ogsijiinku waxay leeyihiin heer faafin gaabis ah. Unugyada ogsijiinta ayaa lagu hodmay dhamaadka munaaradda nuugista.
Soosaariyaha ogsijiinta waxa loo dhisay si waafaqsan mabda'a hawlgalka PSA (cadaadiska adsorption lulid) waxana lagu cadaadiyay laba munaaradood oo nuugista oo ay ka buuxaan shaandho molecular. Labada munaar ee nuugista waxaa ka gudba hawo cadaadis leh (saliid hore loo sifeeyay, biyo, boodh, iwm) . Halka mid ka mid ah munaaradda nuugista ay soo saarto ogsijiin, ka kalena wuxuu sii daayaa gaasta nitrogen ee jawiga. Nidaamku wuxuu ku yimaadaa hab wareeg ah. Koronto-dhaliyaha waxa gacanta ku haya PLC.
Ogsajiin waa gaas aan dhadhamin. Ma laha ur iyo midab. Waxay ka kooban tahay 22% hawada. Gaasku waa qayb ka mid ah hawada ay dadku isticmaalaan si ay u neefsadaan. Curiyahan waxa laga helaa jidhka bini aadamka, qoraxda, badaha iyo hawada. Ogsajiinta la'aanteed, aadanuhu ma noolaan karaan. Waxa kale oo ay qayb ka tahay meertada nolosha xiddigaha.
Isticmaalka Ogsajiinta Caadiga Ah
Gaaskan waxaa loo isticmaalaa codsiyada kiimikada warshadaha kala duwan. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo acids, sulfuric acid, nitric acid iyo xeryahooda kale. Kala duwanaanshaheeda ugu falcelinta badan waa ozone O3. Waxa lagu dabaqaa falcelin kiimiko oo kala duwan. Hadafka ayaa ah in kor loo qaado heerka falcelinta iyo oksaydhka xeryahooda aan loo baahnayn. Hawada Ogsajiinta kulul ayaa loo baahan yahay si looga sameeyo birta iyo birta foornooyinka qaraxa. Qaar ka mid ah shirkadaha macdanta ayaa u isticmaala inay burburiyaan dhagaxyada.
Warshadaha ayaa gaaska u isticmaala goynta, alxanka iyo dhalaalidda biraha. Gaasku waxa uu awood u leeyahay in uu dhaliyo heerkul dhan 3000 C iyo 2800 C. Tan waxa looga baahan yahay oxy-hydrogen iyo oxy-acetylene torchs. Habka alxanka caadiga ah wuxuu u socdaa sidan: qaybaha birta ah ayaa la isku keenaa.
Olol heerkul sarreeya ayaa loo isticmaalaa in lagu dhalaaliyo iyaga oo kululeynaya isgoyska. Cidhifyada waa la dhalaaliyaa oo la adkeeyaa. Si loo jeexo birta, hal cidhif ayaa la kululeeyaa ilaa ay casaan noqoto. Heerarka ogsijiinta waa la kordhiyaa ilaa qaybta kulul ee casaanka ah ay oksidized. Tani waxay jilcisaa birta si ay u kala fogaato.
Gaaskan ayaa looga baahan yahay inuu soo saaro tamar habka warshadaha, matoorrada iyo maraakiibta. Waxa kale oo loo adeegsadaa diyaaradaha iyo baabuurta. Sida ogsajiinta dareeraha ah, waxay gubtaa shidaalka hawada sare. Tani waxay soo saartaa dareenka looga baahan yahay meel bannaan. Dharka hawada sare ee cirbixiyayaashu waxay ku dhow yihiin ogsijiin saafi ah.
1:Warshado waraaqo iyo saxaro ah oo loogu talagalay nadiifinta Oxy-ga iyo sifaynta
2: Warshadaha muraayadaha lagu tayeeyo foornada
3:Warshado bir ah oo lagu tayeeyo oksijiinta foornooyinka
4: Warshadaha kiimikaad ee falcelinta oksaydhka iyo kuwa guba
5:Daawaynta biyaha iyo biyaha wasakhda ah
6: alxanka gaaska birta, goynta iyo brazing
7: beerashada kalluunka
8: Warshadaha muraayadaha
Shaxda xulashada ee nidaamka ogsijiinta shaandho molecular caafimaad
Qaabka Ogsajiinta Nm³/saacaddii Shaqada la rakibay KW Tirada sariirta isbitaalka
Waxaan samaynaynay taxane taxane ah oo kala soocida hawada muddo ku dhow 20 sano. Iyada oo la kaashanayo nidaamka maaraynta qumman iyo qalabka wax soo saarka ee horumarsan, waxaanu samaynaa horumarin tignoolajiyadeed oo joogto ah. Waxaan la dhisnay iskaashi wanaagsan oo mustaqbalka fog leh machadyo badan oo naqshadeynta iyo cilmi baarista ah. Qaybaheena kala soocida hawada waxay leeyihiin waxqabad ka fiican oo ka fiican.
Shirkaddayadu waxay ka gudubtay ISO9001: 2008 shahaadada. Sharaf badan ayaanu ku guulaysanay. Awoodda shirkadeena ayaa si joogto ah u koraysa.
Waxaan si diiran u soo dhawaynaynaa dhammaan macaamiisheena si ay nala dhisaan iskaashi guul-guul ah.
Hore: mashiinka samaynta gaaska nitrogen
Xiga: Warshada warshadaynta ogsijiinta ee cusbitaalka China
Warshada Soosaarka Ogsajiinta ee Isbitaalka
Warshada Ogsajiinta ee Cusbitaalka Cabin Mobile
Warshada Dhalinta Ogsajiinta ee Cisbitaalka
Warshada Ogsajiinta ee Isbitaalka
Qalabka gaaska daawaynta nooca psa oxygen dhalisa
Xallinta Gaaska Ogsajiinta ee Caafimaadka / Warshadaha